GadaaTube: Melbourne’s Oromo Community Radio Celebrates 15 Years of Broadcast « GadaaTube
Melbourne’s Oromo Community Radio Celebrates 15 Years of Broadcast
See More Videos	France24: Ethiopia After Meles...
RAB: Atse Zenawi, Atse Yohannes:...
Yunivarsitiin Adaamaa Barattoota...
Oromo - Seife Nebelbal Radio -...
Radio Marii: Gaafif Deebii Pireezidaantii...
Al Jazeera: Power Vacuum and Uncertain...
5/30/2011 - Qeerroo: TV Oromiyaa...
The Oromo Community Radio in Melbourne, Australia, has been in service since August 10, 1995. Melbourne’s Oromo Community Radio (OCR-MEL) is broadcast every Sunday from 1pm to 2pm (local time) on 92.3FM, and online at 3ZZZ.com.au.
The Melbourne Oromo radio is one of the four Oromo radio broadcasts in the Diaspora. The other radio broadcasts are based in the United States: Washington-DC Oromo Community Radio (on WUST 1120AM – every Saturday from 10:00am to 10:30am), the Minneapolis Oromo Community Radio (on KFAI 90.3FM or 106.7FM – every Sunday from 6pm to 7pm), and the Minneapolis-based Voice of Oromiyaa (on KFAI 90.3FM or 106.7FM – every Sunday from 5pm to 6pm).
Title: Melbourne’s Oromo Community Radio Celebrates 15 Years of Broadcast
Tags/Credits: Australia, Community Association, OCR-MEL, Victoria (Australia)	More Videos
Oromo TV: OYA Oromo Folk...
TVOMT Gaafif Deebii Artist...
VOA Interviews Rick DellaRatta...
Teklemariam(Kumsaa) Diriirsaa said,
December 20, 2011 @ 7:45 am
Harka fuune! obboloota kiyya, ilmaan Oroomoo biyya AUSTIRAALIYAA jiraattan hundinuu, baga hayyaana kanaan isin gayen jedha. Anis biyyuma ormaan jiraadha. Yoon interneetin isin argu gammachuu guddina imimmaan lammummaa ija kiyya keessaa coccophe. Bakka isin sirbitanitti ka’eetan sirbe. Bakka isin weeddiftanitti isin wajjinan weeddise. Bakka isin geerrartanitti isin wajjin geerrare. Akkuma Alii Birraa, beekamaafi kabajamaan keenya, “miilan — garaan biyyaa hin bawu.” jedhe sana, biyya jirru hundatti ‘AADAA keenya jajjabeessun barbaachisaa waan tayeefuu, gara fuulduraattis akkanumatti akka itti fuftan jechaa, nagaa, fayyaa, bilisummaafi jiruu gaariin isiniif hawwa.
Waaqayyo isin wajjin haa tawu!